‘खेलअगाडि मेस्सीलाई ज्वरो आओस्’
विचार / विश्लेषण
शिक्षा / प्रविधि
कला / मनोरञ्जन
स्वास्थ्य / जीवनशैली
रोचक / रमाइलो
कोशी अनलाइन शनिबार, ०७ भदौ, २०७६ मा प्रकाशित
एजेन्सी, ७ भदौ । स्पेनिस क्लब रियल बेटिसका प्रशिक्षक रुबीले प्रतिद्वन्द्वी क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीलाई खेल अगाडी ज्वरो आओस् भन्दै जोक गरेका छन् । खेलको पूर्वसन्ध्यामा बोल्ने क्रममा उनले रियल बेटिस र बार्सिलोनाबीचको खेलअघि मेस्सीलाई ज्वरो आओस् भन्दै मजाक गरेका हुन् ।
स्पेनिस ला लिगाअन्तर्गत डिफेन्डिङ च्याम्पियन टोली बार्सिलोनाले आइतबार राति आफ्नो दास्रो खेल खेल्दैछ । नयाँ सिजनको ला लिगाअन्तर्गत बार्सिलोनाले आफ्नो दोस्रो खेलमा रियल बेटिसविरुद्ध खेल्न लागेको हो । आइतबार राति १२ः४५ बजे हुने यस खेलमा मेस्सी बेन्चमा बस्ने पक्का भइसकेको छ ।
बार्सिलोनाले मेस्सीलाई यस खेलमा बेन्चमा राख्ने जानकारी दिइसकेको छ । केही समयअघि अभ्यासका क्रममा घाइते हुन पुगेका मेस्सी रियल बेटिसविरुद्धको खेलबाट खेलमा फर्कँन सक्ने बताइएको थियो । तर, उनी पूर्ण रुपमा ठीक नभएको भन्दै बार्सिलोनाले मेस्सीलाई बेन्चमै राख्ने भएको हो । तर, रियलका प्रशिक्षकले भने मेस्सीलाई चिसो लागोस् र ज्वरो आओस् भन्दै मजाक गरेका छन् ।
आफू र आफ्नो टोली मेस्सीबाट डराएको बताउँदै उनले यस्तो मजाक गरेको बताइएको छ । उनले भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा मेस्सीले यस खेलबाट नयाँ सिजनको ला लिगाको सुरुआत गर्नेछन् । तर, म चाहान्छु कि, यस खेलअघि मेस्सीलाई चिसो लागोस् र ज्वरो आओस् । मेस्सी घाइते चाँही नहुन् तर यसरी चिसो लागोस् कि उनले यो खेल खेल्न नसकुन् ।’
प्रशिक्षक रुबीले आफू यस खेलबाट अंक बनाउन चाहाने बताए । उनले भने, ‘हामीले यस खेलबाट ३ अंक निकाल्ने योजना बनाएका छौँ । तर, मलाई थाहा छ त्यहाँ मेस्सी भएमा गाह्रो हुनेछ । मेस्सी खेलमा भएमा बार्सिलोनाले फाइदा उठाउनेछ ।’
बेटिसले नयाँ सिजनको ला लिगाको सुरुआत हारबाट गरेको छ । उसले सिजनको पहिलो ला लिगाको खेलमा भाल्लाडोलिडसँग २–१ गोलको हार ब्यहोरेको थियो । आफ्नै मैदानमा भएको सो खेलमा खेलको आठौं मिनेटदेखि ऊ १० खेलाडीमा सीमित बनेको थियो । जसको फाइदा उठाउँदै पाहुना टोली भाल्लाडोलिडले जित निकालेको थियो ।
अघिल्लो सिजन १०औं स्थानमा रहेर ला लिगा सकाएको उसले बार्सिलोनाविरुद्ध ४–३ गोलको जित पनि निकालेको थियो । अघिल्लो नोभेम्बरमा भएको सो खेलमा उसले बार्सिलोनालाई हराएको थियो ।
पत्रकार कमल पौडेलको उपचारका लागि गोयलको सहयोग
कोरियामा कोरोना : ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा सरकार
मलेसियामा महाथिरको राजीनामा स्वीकृत, अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त
श्रीमतीले टिकटक बनाउँदा सई परे कारवाहीमा
तिर्थयात्रामा ज्यान गुमाएका ६ जनाको सामुहिक दाहसंस्कार
प्रदेश एकलाई अपाङ्गतामुक्त बनाइने
भर्खरै पोस्ट भएका
कोशी अनलाइन डटकम विराटनगरस्थित रिपब्लिक हेराल्ड मिडिया एण्ड पब्लिकेसन प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित समाचार पोर्टल हो । यसले समाजका विचार-विश्लेषण, अन्तर्वार्तासहित विभिन्न क्षेत्रका खोजमूलक समाचारलाई प्रस्तुत गर्दछ।
१२५२ / ०७५-७६
रिपब्लिक हेराल्ड मिडिया एण्ड पब्लिकेसन प्रा.लि.
विराटनगर महानगरपालिका-२, शनिहाट, मेनरोड
विज्ञापनका लागि: +९७७-०२१-५२१८४१
Copyright - 2020. All Right Reserved.